Ngwunye nke ikpo ọkụ na-emepụta Nitino With High Frequency Chaating
Home / ngwa / Ọkụ na-egbuke egbuke / Itinye n'ọkwa Okpomọkụ ọnọdụ Nitinol
Ntughari ikpo ọkụ Nitinol
Category: Ọkụ na-egbuke egbuke Tags: okpomọkụ nitinol, Nduol kpo oku, itinye ọkụ Nitinol, itinye oku Nitinol, Nitinol kpo oku na-abanye n’ime usoro, Nitinol induction kpo oku, ime Nitinol
Ngwunye mmiri ọkụ Nitinol Na-adịwanye Elu RF Ngwá Agha Ngwá Agha Ntube
Ebumnuche Iji kpoo eriri Nitinol nke 0.005 "(0.13mm) nke dayameta maka ngwa nhazi
Ihe Nitinol waya
Okpomọkụ 930 ° F (500 Celsius C)
500 kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa DW-UHF-6kW-I ike-ike itinye ọkụ na-enye ike nke nwere ụlọ ọrụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nwere ihe nchekwa 0.33μF abụọ (ngụkọta 0.66μF). Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ nke emebere ma mepụtara maka ngwa a.
Usoro Ihe eji arụ ọrụ nke ndị ahịa nwere ihe dị iche iche na-eme ka a na-etinye uche abụọ: 0.1 "(2.54mm) nke dị n'èzí na-apụ apụ na cylinder 1" inch (25.4mm). Ndị Nitinol achọrọ ka etinyere na OD nke cylinder dị n'ime. Ngwunye ígwè siri ike a na-eweta gbanwere iji belata ọkụ
uka. A na-egwupụta ihe siri ike nke dị n'ime ya iji nye ohere ka etinye ya na ID. A na-eji eriri igwe pụrụ iche dị anọ na nke dịpụrụ adịpụ iji mepụta usoro okpomọkụ achọrọ. A na-eduzi ule ndị mbụ (iji thermocouple) na ihe ndozi na-enweghị akụkụ iji guzobe usoro kpo oku. A na-etinye akụkụ ahụ n'ime ihe ndozi na ntinye ọkụ-ikpo ọkụ na akụkụ ahụ. A na-enye ike ruo mgbe akụkụ ahụ dị ọkụ na ebe edoziri ya ma jide ya na okpomọkụ a maka oge 2.5. Ngwunye ahụ na-emenyụ ozugbo na mmiri na-eso usoro okpomọkụ. A na-eme akụkụ dị iche iche maka ncheta ọdịdị.
Nsonaazụ / Uru Uru Ameritherm na-eme ka ihe ndozi ahụ dị na ebe a kara aka na ọnụego akọwapụtara na waya Nitinol dị ka ọchọrọ n'ime nkeji 4, na-eji obere ume na oge karịa oven ọdịnala
Ngwunye na-ekpo ọkụ Turbine Fan For Welding